होमपेज / खेल / विचार / तेलमूल्य र रेमिट्यान्स
तेलमूल्य र रेमिट्यान्स	17 Jan 2016 आइतबार ३ माघ, २०७२
राजु पौडेल	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
विश्व बजारमा सन् २०१२ मा प्रतिब्यारेल १२५ डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य सन् २०१५ को अन्त्यमा आइपुग्दा ३७ डलरमा खुम्चियो। गत असोजदेखि नै सुरु भएको नाकाबन्दीले तेलको मूल्यमा आएको गिरावटको लाभ इन्धन आयातमा शतप्रतिशत भारतसँग आश्रित मुलुक नेपालले उठाउन सक्ने कुरै भएन। इन्धन आयातमा देखिएको कृत्रिम अभाव ढिलोचाँडो समाधान होला, तर वैदेशिक रोजगारीका लागि सजिला गन्तव्य मानिँदै आएका मध्यपूर्वका कतिपय तेल उत्पादक राष्ट्रमा सस्तोमा पोखिएको नेपाली श्रम र त्यसवापत् नेपालले प्राप्त गर्दै आएको रेमिट्यान्सको भविष्य के होला? वैदेशिक रोजगारीका लागि राम्रो मानिएको गन्तव्य मलेसियाको श्रम बजारमा आएको ठूलो गिरावट ...फ्रि भिसा–फ्रि टिकटले' मात्र प्रभावित बनेको होइन। पछिल्लो समयमा त्यहाँ उत्पन्न राजनीतिक तनावसमेत जिम्मेवार छ। विश्वका विभिन्न १६ मुलुकबाट श्रमिक भित्राउँदै आएको मलेसियाले नेपाली श्रमिकको चापलाई केही दशकदेखि थेग्दै आएको छ। अहिले माग भई आएका काममा समेत समयमा श्रमिक आपूर्ति गर्न नसक्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित बन्ने संकेत देखिएको छ।गत बैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि ४० प्रतिशतभन्दा बढीले आप्रवाह भएको रेमिट्यान्स आपत्कालीन मानवीय सेवामा खपत भएको छ। त्यसलगत्तै राष्ट्रले व्यहोरेको आर्थिक नाकाबन्दीको असर कम गर्ने स्रोतसमेत रेमिट्यान्स हुँदै आएको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमगन्तव्य प्रभावित हुनुले सम्भावित वित्तीय संकटलाई संकेत गर्छ।मलेसियाको श्रमबजार चौपट भए पनि नेपाली युवालाई देशकै सीमाभित्र आयआर्जन गर्ने सुविधा छैन। ०७२ सालको सुरुबाटै नेपालमा उत्पन्न प्राकृतिक र राजनीतिक अस्थिरताले देशका युवालाई जसरी भए पनि सीमा नाघेर जान दबाब परेको छ। भर्खर मध्यअमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिका हुँदै अवैधानिकरूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न लागेका ५१ युवा पक्राउ परे र तीमध्ये २६ जना नेपाली युवा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले बतायो। अमेरिकाको दक्षिणी सीमास्थित ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिकोका पर्खाल छिचोलेर अमेरिका प्रवेश गर्ने कैयौँ नेपाली युवा छन्। बाध्यताबस विदेश पुगेका युवाको श्रमबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पटकपटक असफल हुनबाट बचाएको छ। बर्सेनि डेढ लाख नेपाली श्रमिक थपिने मलेसियाको सोझो विकल्प अब तेल उत्पादक अरेबियन राष्ट्रतर्फ मोडिनेछन्। तथ्यांकले समेत मलेसियाको विकल्पमा साउदी पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको देखाएको छ। साउदी तेल उत्पादक राष्ट्रमध्ये नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। जहाँ अहिले झन्डै ७ लाख नेपाली कार्यरत छन्। अब थपिने श्रमिक र त्यहाँ भएका श्रमिक संख्याले त्यो तातोमा आफ्नो बाहुबल बेचेर आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स आप्रवाहको मात्रात्मक र गुणात्मक वजन नेपालले खोज्ने बेला आइसकेको छ।अरेबियन राष्ट्रका बजारहरू तुलनात्मकरूपमा मितव्ययी मानिन्छन्। धार्मिक दर्शनमा आधारित समाजको बनावटले पनि आप्रवासी कामदारले कम खर्चमा दैनिकी चलाउन सक्ने सुविधा यस्ता बजारको विशेषता हो। निर्वाध उपभोगवादी युगको चरम अभ्यास त्यहाँका रैथानेको अर्को विशेषता हो। साउदीमा गत वर्ष कायम भएको राजस्व संकलन अहिले १५ प्रतिशतले घटेर १ सय ६२ अर्ब अमेरिकन डलरमा खुम्चिएको छ। इन्धनको बिक्रीबाट आउने राजस्वमा मात्र २३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। कच्चा तेलको विश्व बजारमूल्यमा आएको गिरावट यसको प्रमुख कारण बुझेको त्यहाँको सरकारले इन्धनमा दिँदै आएको सहुलियत कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। इन्धन र यससँग सम्बन्धित अन्य पदार्थको साविकको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिसकेको छ। यति गर्दा पनि त्यहाँको तेलको मूल्य विश्वबजारका तुलनामा निकै सस्तो छ। तर, बजेट घाटा पूर्तिका लागि यो मूल्यवृद्धि खाद्यान्नलगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्न गयो भने नेपालजस्तो देशबाट सस्तोमा श्रम बेच्न साउदी प्रवेश गरेका नेपाली युवा नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछन्। कतिपय देशले अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलाई सामना गर्न अपनाउँदै आएको लेबर ट्याक्सबाट यस्ता अरेबियन देशहरू आजसम्म सुरक्षित छन्। यो सुरक्षित यात्रा अझै कति समयसम्म सुरक्षित रहला कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन। यसै पनि इन्धनको मूल्यमा आएको भारी वृद्धिले खाद्यान्नमा अन्य देशसँग आश्रित अरेबियन राष्ट्रको दैनिकी पहिलाभन्दा महँगो हुनेछ। यो दैनिकीले रेमिट्यान्सको साविक आप्रवाहमा विशेषतः नेपालजस्ता देशलाई सोच्न बाध्य तुल्याउनेछ।कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशतबराबरको रकम रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने नेपाली अर्थतन्त्रको ढाँचा पुरानो भैसकेको छ। अहिले नेपालमा हुने धेरै वित्तीय क्रियाकलापको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। विश्व बैंकले समेत रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायता आपत्कालीन मानवीय सेवामा खपत हुँदै आएको बताइसकेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा देशमा लामो समयदेखि अस्थिर राजनीति कायम छ। आजको उपभोगवादी युगमा देशका ऊर्जाशील युवा देशको सीमाभित्र कैदी बन्न सक्दैनन्। झन्डै ४० लाख युवा त्यसै विदेशिएका होइनन्। यो संख्या अझै बढ्ने वातावरण बनिरहँदा पनि युवाका लागि सुरक्षित श्रमबजारको खोजी गरिएको छैन।विश्वका १ सय १० देशमा नेपाली युवाले वैधानिकरूपमा आफ्नो श्रम बेच्ने इजाजत पाएका छन्। तर, तीमध्ये जम्माजम्मी ६ देशसँग मात्र श्रमसम्झौता गरिएको छ। यो तथ्यांकले जोखिमयुक्त वैदेशिक रोजगारीलाई बुझाउँछ। श्रमबजारमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको पहिलो कानुनी बन्देज भनेको श्रमसम्झौता हो। तर, त्यसमा सरकार चुक्दै आएको छ। बढ्दो प्रवासनको प्रवृत्ति र देशको स्थितिलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षित श्रमबजारको खोजी गर्न सक्दा मात्र श्रमिकका हकअधिकार सुरक्षित हुन्छन् भने राष्ट्रले गुणात्मक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सक्छ।भूतपूर्व महासचिव, गैरआवासीय नेपाले संघ साउदी Tweet प्रतिक्रिया